Dilal ka dhacay magaalada Muqdisho - BBC News Somali
Posted at 17:48 6 Jun
Waxaa intaas inoogu eg tabinteenii tooska ahayd ee maanta oo Arbaco ah, waxaa ka mid qodobadii ugu waawayn.
Posted at 16:07 6 Jun
Rag hubeysan ayaa maanta ku dilay nabadoon Xuseen Jimcaale Geedi gurigiisa oo ku yaala degmada Hawlwadaag ee magaalada Muqdisho. Marxuumka lama oga sababta loo dilay wayna baxsadeen dableydii dilka gaystay.
Shalay galinkii dambe ayay ahayd markii sidaas oo kale nabadoon la oran jiray macalin Daahir Cali Tifow ay koox hubaysan ku dishay degmada Wadajir ee isla magaalada Muqdisho.
Dhanka kale saaka askari ka tirsan dawladda hoose ayaa wiil dhalinyaro ah oo ku shaqaysta mooto bajaaj ku dilay degmada Xamarweyne sida ay sheegeen dad goobjoog ah.
Wiilka dhalinyarada ah iyo askariga ayaa is af dhaafay dabadeedna askari ayaa rasaas ku riday wiilkii bajaajta watay halkaas ayuuna ku dhintay.
Dilalkan ayaa ku soo badanayay Muqdisho tan iyo markii ay dhalatay bisha Ramadaan waxana qaarkood sheeganayay kooxda AlShabaab halka qaar kalena ay geysanayeen rag dareyska ciidamada dawladda ku labisan.
Posted at 14:09 6 Jun
Tababare kubadda cagta oo guul uu soo hoyiyay 22 sano ka hor lagu abaalmariyay
Tababare u dhashay dalka Netherlands, oo kooxda kubadda cagta ee Nigeria guul u horseeday ciyaarihii olambikada ee la qabtay sanaddii 1996 ayaa imika la gudoonsiiyay hadyad ay 22 sano ka hor u ballanqaaday dowladda.
Sida ay ku warantay laanta luuqadda Pidgin ee BBC Jo Bonfrere ayaa la siiyay furaha guri ka kooban saddex qol oo ku yaalla caasimada, Abuja.
Abaalmarintan ayaa waxaa gudoonsiisay wasaarada guriyaynta ee dalkaasi.
Dowladda Nigeria ayaa fulinaysay balanqaad tababarahan ay u sameeysay dowladdii militariga ee uu hogaaminayay Sani Abacha,ka dib markii Nigeria ay 3-2 kaga adkaaday ciyaartii kama dambaysta ahayd ee olambikada ee lagu qabtay Mareykanka.
Jo Bonfrere ayaa guul u horseeday Nigeria 1996
Posted at 13:31 6 Jun
Askari Maraykanka ah oo xero kala baxsaday gaari gaashaaman
Booliiska dalka Maraykanka ayaa saacado eryanayay askari ka tirsan militariga Maraykanka oo xero kala soo baxsaday gaari gaashaaman.
Arrintan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Richmond, halkaas oo baacsashada ay ka qeybqaateen boqolaal gaadiidka booliska oo iyaga oo bikaacinaya leerarka, dhawaaqna yeerinaya saacado kadib ku guuleystay in ay soo xiraan ninkii falka gaystay.
Ma jiro qof ku dhaawacmay arrintan, balse dadkii magaalada ayaa aad ula yaabay waxa dhacay.
Afhayeenka booliiska Keeli Hill ayaa shir jaraa’id ka sheegtay in gaariga uu ku socday xawli sare, balse markii dambe ay ku guuleysteen in ay xiraan ninka oo la aqoonsaday in uu askari yahay.
Lama sheegin sababta ku kaliftay falkan.
Haweenay magdhow la siiyay ka dib gef loogu geystay hoteel ku yaalla Nairobi
Haweeney reer Kenya ah oo meel fagaaro ah lagu fadeexeeyay ka dib markii shaqaalaha huteel caan ah uu ku eedeeyay in ay jirkeeda ka ganacsato ayaa imika la siiyay lacag magdhaw ah.
Haweeneydan oo maxkamad gaysay dacwad ayaa waxa ay maxkamadda u xukuntay in la siiyo lacag dhan 3 milyan oo shilinka Kenya ah taasi oo u dhiganta $20,000.
Winfred Njoki Clarke ayaa maxkamad geysay huteelka Intercontinental ee ku yaalla Nairobi, muddo 20 sano laga joogo ka dib markii ay ku tilmaameen in ay tahay "haweenay akhlaaq ahaan aan wanaagsanayn ".
Shaqaalaha huteelka ayaa macaamiisha hortooda ku aflagaadeeyay oo haweenaydan ku tilmaamay in ay tahay mid jirkeeda ka ganacsata.
Ka dib dhacdadaasi ayaa haweeneydan lagu wareejiyay booliiska oo waxa ay xirnayd laba maalmood.
Shaqaalaha huteelka ayaa arrintan ku sameeyay ka dib markii ay huteelka timid iyada oo uusan wehelin nin ,waxa ayna qorshaynaysay in ay la kulanto gabadh ay saaxibo ahaayeen.
Garsoore Msagha ayaa imika u xukumay lacag dhan $20,000 taasi oo ah
Winfred Njoki Clarke ayaa loo gaystay hadal gef ah 20 sano ak hor
Posted at 12:26 6 Jun
Huteelka uu ka dhaci doono kulanka Trump iyo Kim oo la shaaciyay
Kulanka sida wayn loo wada sugayo ee lagu wado in uu dhex maro madaxwayne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ka dhici doona jasiirada Sentosa,waxaa sidaasi xaqiijiyay aqalka cad.
Mr Trump ayaa Talaadadii sheegay in"wax waliba ay si dhaqso ah u socdaan".
Mr Trump iyo Mr Kim ayaa ku kulmi doona hotelka Capella oo ku yaalla jasiirada Sentosa
Loolanka sawirrada ‘Hore iyo kuwa dambe’ oo qabsaday baraha bulshada
Waxaa baraha bulshada Soomaalida ka socda xujo-fur ama waxa loo yaqaano Challenge, iyada oo dadka ay isku xujeysanayaan in qofkast uu soo dhigo sawir sanado badan ka hor ah iyo mid hadda ah, waxaana loo bixiyay 'hor iyo dib' ama 'Before and After' oo ah sida ay ku tahay luuqada English-ka.
Haddaba qeybta Baraha Bulshada ee BBC Somali oo u kuurshaday arrintan, ayaa warbixintan kusoo koobaysa waxa u baxay.
Waxa uu qosolka yimaadaa gaar ahaan marka labada sawir ee uu qofka soo dhigay ay aad u kala fogyihiin, iyada oo caadiyan sawirka hore ay qofka ka muuqato diif iyo duruuf aad u badan, halkan sawirka dambe uu yahay qof naaxsan, quruxsan, islamarkaasna naashnaashan.
Warbixintan oo intan ka faahfaahsan iyo sawirro badan oo la is barbar dhigayo lifaaqan kaga bogo
Posted at 11:31 6 Jun
Kenya oo dhakhaatiir ka keensatay Cuba
Kontan dhakhtar oo u dhashay dalka Cuba ayaa yimid dalka Kenya taasi oo looga gol leeyahay in sare loogu qaado adeega caafimaadka dalkaasi.
Waxaa sidoo kale lagu wadaa in ay Kenya soo gaaraan 50 dhaktar oo kale oo leh taqasusaad kala duwan.
Ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirta dalka Kenya ayaa ka soo horjeedsaday dhakhaatiirta u dhashay dalka Cuba ee Kenya la keenay .
Waxa ay saraakiisha ururka sheegeen in dhakhaatiir ku filan ay dalka joogaan oo aan loo baahnayn dhakhaatiir ajnabi ah.
Ururka dhakhaatiirta Kenya ayaa sidoo kale rumaysan in arrintan ay minjaxaabinayso dadaalka lagu doonayo in lagu kordhiyo mushaarka dhakhaatiirta Kenyanka.
Sanadkii aanu soo dhaafnay ayaa dhakhaatiirta Kenya waxay sameeyeen shaqa joojin taasi oo ay kaga cabanayeen mushaaraadka iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan.
Posted at 11:27 6 Jun
Waxyaabaha aad ku maqli doontaan Idaacadda Duhurnimo
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waxyaabaha aad ku maqli doontaan Idaacadda Duhurnimo waxaa ka mid ah:Gudoomiyaha Bangiga dhexe ee Malaysia oo eedo musuqmaasuq isu casilay.
Itoobiya oo sheegtay in ay maalgashiga gaarka ah u furayso shirkadaha dawladda.Kenya oo dhakhaatiir Cuban ah soo qoratay.
Mutadawiciin Muqdisho afur ku qaybiya iyo Wararkii ciyaaraha.
Posted at 11:09 6 Jun
Diyaarad la la'yahay dalka Kenya iyo howla gurmad oo socda
Kooxaha gurmadka ayaa baadigoobaya diyaarad yar oo ah nooca rakaabka oo la la’yahay meel ay jaan iyo cirib dhigtay tan iyo shalay galab.
Diyaarada ayaa waxaa saarnaa 10 qof, 8 rakaab ah iyo labada duuliye.
Warbaahinta maxaliga ah ayaa ku warantay in diyaaradda laga baadigoobayo kaynta Aberdares oo ku taalla bartamaha dalka Kenya.
Diyaaradda ayaa ka soo duushay magaalada Kitale ee ku taalla galbeedka Kenya waxa ayna ku sii jeeday caasimada Nairobi.
Howlaha gurmadka ayaa la joojiyay xalay ka dibna dib loo bilaabay saaka.
Dhanka kale shaqaala ka mid ah hay’adda laanqayrta cas ee Kenya oo gurmadka ka qayb qaadanayay ayaa gaarigii ay wateen uu shil galay.
Shilkani ayaa waxa ku dhaawacmay saddex ka mid ah shaqaalaha laanqayrta cas
Diyaarada ayaa la rumaysan yahay in ay ku burburtay kaynta Aberdares
Posted at 10:38 6 Jun
Kaaliye Trump oo shaqadeeda ku wayday qof ay ku jeesjeestay
Kaaliyihii madaxweyne Trump ee ku jeesjeestay John McCain oo ah seneter Maraykanka ah oo qaba xannuunka Kansarka ayaa shaqadeedii wayday.
Intii la waday dhagaysigii lagu xaqiijinayay in Gina Haspel ay u qalanto madaxnimada hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA ayay Kelly Sadler sheegtay in mucaaradnimada Seneter McCain aysan dhib lahayn maadaama oo uu kolayba dhimanayo.
Sadler ayaa wakhtiyadan dambe aad loo hadal hayay
Posted at 10:26 6 Jun
Marooko iyo Maraykanka midkee martigalin doona Koobka Adduunka?
Dalka Marooko ayaa quud darraynaya in uu martigaliyo koobka adduunka ee 2026 balse wuxuu culays wayn ka soo food saaray dalal ka dhaqaale badan oo raba in ay isla marti galiyaan.
Dalalkaas ayaa kala ah Maraykanka, Canada iyo Mexico.
BBC-da ayaa warbixintan ku eegaysa xamaasadda kubbadda cagta ee Marooko, Xasan Haybe ayaana soo jeedniya
Posted at 10:10 6 Jun
Labo boqol oo oo ruux oo wali lagu la'yahay Guatamala
Masuuliyiinta dalka Guatamala ayaa ku dhawaaqay in la la'yahay ku dhawaad labo boqol oo ruux, ka dib markii ay Foolkaano ka qaraxday dalkaas Axaddii.
Tirada dadka ku dhintay foolkaanahaas ayaa iyagana gaadhay toddobaatan iyo shan.
Qaraxyo cusub oo foolkaanuhu sababay ayaa horseeday in la daad gureeyo dad badan oo ku noolaa dhulka joogiisu hooseeyo.
Posted at 9:45 6 Jun
Xulka kubbadda Argentina oo baajiyay ciyaar uu la lahaa Israa'iil
Xulka kubBadda cagta ee dalka Argentine ayaa joojiyay ciyaar saaxiibtinimo oo uu la yeelan lahaa xulka kubadda cagta ee Israa'iil, taas oo qorshaysnayd maalinta Sabtida ah.
Waxaa lagu waday in ciyaartu ay ka dhacdo magaalada Qudus , waxaana lagu waday in ay noqoto middii u dambaysay ee xulka Argentine uu ciyaaro kahor inta uusan bilaabin Koobka Adduunka ee bushan ka dhacaya dalka Ruushka.
Waxaa jiray cadaadis isasoo tarayay oo saarnaa xulka Argentine oo ah in aysan la ciyaarin Israa'iil kaas oo uga imaanayey dibad baxayaal ka eedsheeganaya habdhaqanka Israa'iil ee ku aaddan Falastiiniyiinta.
Posted at 8:07 6 Jun
Ilhaan Cumar oo u sharaxan Aqalka Congress-ka Maraykanka
Ilaahn Cumar oo ah gabadh katirsan xildhibaannada aqalka hoose ee gobalka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa maanta isu diiwaan galisay murashaxnimada xubin katirsan aqalka Congress wadanka Maraykakan
Jagadan ay u tartamayso waxaa horay u hayn jiray xildhibaan Kith Ellison oo ah nin Muslim ah oo isaguna u tartamaya xilka xeer ilaaliya guud ee gobolka Minnesota.
Gobolka Minnesota ayay maanta ka ahayd maalintii ugu danbaysay ee uu qof isu diiwaan galinkaro in uu u tartamo jagooyin kala duwan.
Waxaana laga yaabaa in ay soo baxaan maalmaha dhaw dad badan oo jagadaasi kula tartama Ilahaan. Wariyaha BBC-da Mohamed Haji Hussien ayaa Ilaaan waraystay kadib markii ay is diiwaan galisay.
Lifaaqan ka dhagayso waraysigaas iyo warbixino kale oo badan
Posted at 7:48 6 Jun
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in cunaqabataynta reer Galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka "ay dhibaato ku tahay cid walba"in la qaadana ay dan ugu jirto qof walba.
Isaga oo ka hadlaya Austria ayuu sheegay in dhaqaalaha Ruushku uu u korayo si miisaaman, inkastoo Midawga Yurub iyo Maraykanka ay cunaqabataynno ku soo rogeen Ruushka ka dib markii uu Ukraine kala wareegay gobolka Crimea.
Hogaamiyaha Austria Sebastian Kurz ayaa sheegay in dalkiisu uu doonayo in uu noqdo buundo isku xirta reer Galbeedka iyo Ruushka.
Laakiin wuxuu sheegay in uusan hoos u dhigaynin cunaqabataynta uu soo rogay Midawga Yurub.
Safarkan ayaa ahaa midkii koobaad ee Putin ku tago Galbeedka Yurub ku dhawaad muddo hal sano ah.
lifaaqan kaga bogo waxa uu Putin ka yiri walaaca laga qabo in uu Midawga Yurub kala qaybiyo
Madaxweyne Putin iyo hogaamiye Kurz
Posted at 7:33 6 Jun
Huteelka ay ku kulmayaan Trump iyo Kim oo la shaaciyay
Kulanka aadka looga dhursugayo ee dhex maraya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ka dhici doona hoteel ku yaalla jasiiradda Sentosa ee dalka Singapore sida uu shaaciyay Aqalka Cad ee looga arrimiyo Maraykanka.
Kulankan taariikhiga ah ee la qorsheeyay ayaa dhici doona 12 Juunyo, laakiin wali macluumaad badan oo la xaqiijiyay lagama hayo.
Waxay noqon doontaa markii koobaad ee ay kulmaan hogaamiye Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweyne xil haya oo Maraykan ah.
Trump wuxuu sheegay Talaadadii in qorsheyaashu ay "si wanaagsan u socdaan".
"Xiriiro badan ayaa la sameeyay, wada xaajoodyo badan ayaa socda safarka ka hor" ayuu ku yiri saxafiyiinta.
"Waa arrin ahmiyad leh" maalmo aad muhiim u ah ayayna noqon doonaan".
Xog intan ka sii faahfaahan kaga bogo lifaaqan
Huteelka ay ku kulmi doonaan Trump iyo Kim
Posted at 7:26 6 Jun
Maxaa kasoo baxay shirkii Baydhabo?
Qodobada ugu muhiimsan ee shirka laga soo saaray waxaa ka mid ah arimaha amniga iyo ladagaalanka wax lagu tilmaamay argagaxisada.
Ciidanka daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ayaa la sheegay inay qayb ka noqon doonaan howgal lagu furayo wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Baydhabo, waxayna ciidankaasi hoostagayaan taliska guud ee ciidanka xooga dalka ee meleteriga.
Posted at 7:22 6 Jun
Kulanti wanaagsan akhyaarta halkan nagala xiriirtaay, kuna soo dhawaada tabinteenna tooska ah ee Maanta oo Arboco ah.